JOINT Statement of Intern.Dhammacakka Foundation_Rakhine National Social & Welfare Org. condemn Blast Bodh Gaya India | democracy for burma
JOINT Statement of Intern.Dhammacakka Foundation_Rakhine National Social & Welfare Org. condemn Blast Bodh Gaya India
tags: Blast, Buddhism, Burma, India, International Dhammacakka Foundation, Jihadists, Mahabodhi temple complex, Myanmar, Rakhine National Social & Welfare Organization, Rohingya
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဓမ္မစက္ကဖောင်ဒေးရှင်း(IDF) နှင့်ရခိုင်အမျိုးသားလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တို့မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘီဟာပြည်နယ်၊ ဗုဒ္ဓဂါယာတွင် အကြမ်းဖက်သမားများက ဗုံးထောင်ဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်။
နေ့စွဲ – ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘီဟာပြည်နယ်၊ ဗုဒ္ဓဂါယာတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ နံနက် ၈နာရီကအကြမ်းဖက်သမားများသည်ဗုဒ္ဓဂါယာပတ်ဝန်းကျင်အဆောက်အဦအတွင်းအပြင်နေရာ ၈ ဋ္ဌာနတွင် ဗုန်းထောင်ဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား
ရဟန်းတော်တစ်ပါးအပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၅ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ၀မ်းနည်းကြေကွဲဖွယ် ကြားသိရပါသည်။
ဗုဒ္ဓဂါယာဒေသသည် နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ကျော် ထိမ်းသိမ်းလာခဲ့သော မြတ်စွာဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူရာ မဟာဗောဓိပင်နှင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အမွေအနှစ်များ တည်ရှိရာဒေသလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သာမက ဘာသာအသီးသီးနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အထွဋ်အမြတ်ထားသည့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အလေး
အမြတ်ပြုရာ ဗုဒ္ဓဂါယာ မြေမြတ်မဟာတွင်ကောက်ကျစ်ယုတ်မာသော အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျူးလွန်သူ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
အကြမ်းဖက်သမားများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံအသီးသီးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ
ကိုလည်း တိုက်ခိုက် စော်ကားခြင်း၊ ကမ္ဘာ့လူသားများတန်ဖိုးထားရာ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို ဖျက်ဆီးခြင်းစသော
လူသားမဆန်သည့် လုပ်ရပ်များကို ကျူးလွန်ကြသူများဖြစ်ကြပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ဘာသာရေးဋ္ဌာနများကိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များဖြင့် ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော အကြမ်းဖက် သမားများနှင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း လူ့ပတ်ဝန်းကျင် လူသားကမ္ဘာအတွက် အန္တရာယ်ရှိသူများဖြစ်သောကြောင့် ၄င်းတို့၏
လုပ်ရပ်ကို အလေးအနက် ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် ရှုတ်ချ လိုက်ပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဓမ္မစက္ကဖောင်ဒေးရှင်း (IDF) နှင့် ရခိုင်အမျိုးသားလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့
Joint Statement of International Dhammacakka Foundation and Rakhine National Social & Welfare Organization
to condemn for blasts at one of Buddhism’s holiest sites at Bihar, India.
It was happenedaseries of Bomb blast four of the eight explosions occurred at the Mahabodhi temple complex
and were injured the two monks (Tibetan & Myanmar) at the world famous Buddhist temple in India,
in the morning 8 O’clock , July 7th 2013.
– Buddha- Gaya isaplace that isaUNESCO world heritage site in Bihar,India since 2600 years ago.
– Terrorist organization destroy the Buddhism’s holiest sites in India where is lack of regime
and insulted the all of Buddhism around the world.
– We strongly condemn this crisis and those terrorists committed the peaceful human society
to destroy with purpose.
– We strongly blame for this crisis.
International Dhammacakka foundation and Rakhine National Social & Welfare Organization.
www.alodawpyei.org / Email.contact@alodawpyei.org
Kumara Ashin ၏စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
← ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့တွင်
JIHADIS BACKING ROHINGYA,BENGALI? Blasts at one of Buddhism’s holiest sites Bodh Gaya-VIDEOS →